Tayada Farsamada: Dhaqammada wanaagsan ee horumarinta Software-ka Bilaashka ah. Laga soo bilaabo Linux
Sida dhinac walba oo nolosheena ah oo aan dhiseyno, tayada farsamada (maqnaanshaha cilladaha dhismaha), a horumarinta software sidoo kale waa qodob muhiim u ah aasaasiga ah guulaystay ka mid ah.
Sidaa awgeed, samee a qiimaynta qoto dheer oo joogto ah tayada farsamada badeecada la soo saaray, kiiskan, badanaa Código, ayaa ah mudnaanta "sine qua non", si aysan u fulin oo kaliya ujeedada loo abuuray, laakiin si aysan u keenin dhibaatooyin kale, natiijada ka dhiman awgeed tayada farsamada.
1 Tayada farsamada
1.1 Astaamaha noocee ah ayaa qeexaya tayada farsamada ee softiweerka?
2 Deynta Farsamada
3 Dhaqan tayo farsamo oo wanaagsan
Un wax soo saarka software o qalab dijitaal ah (codsi, barnaamij, nidaam) lagu soo saaray tayada farsamada fududeeyaa ah dayactirka iyo dib u isticmaalka ka mid ah, ama qayb ahaan ama gebi ahaanba.
Sidoo kale, sii oo hayso tayada farsamada ee a wax soo saarka software, ma aha wax in si fudud loo qabto, maadaama software-ka uu noqday maanta mid ka mid ah hantida ugu weyn iyo ujeedooyinka istiraatiijiyadeed ee ururada, maxaa yeelay maalin kasta, hababka ugu muhiimsan ee kuwan iyo badbaadadooda lafteeda, waxay kuxirantahay shaqeynta software, iyo xitaa in ka badan khaladaad ama qalad la'aan maalintooda maalin.
"Tayada farsamo ee aaladda dhijitaalka ah waxaa loo aasaasay ilaa heerka qoraalka koodhka ilaha iyo qaabeynta aaladda dhijitaalka ahi ay ka xor yihiin cilladaha dhismaha ee hor istaagi kara isticmaalkiisa ama dib u isticmaalkiisa iyo sidoo kale fududeynta fahamka aqrinta iyo wax ka beddelka Koodhka isha". Qiimaynta Farsamada - Tilmaamaha lagu daabacayo aaladaha dijitaalka ah | Xeerka Hormarinta Horumarinta ee Bangiga Horumarinta Ameerika
Astaamaha noocee ah ayaa qeexaya tayada farsamada ee softiweerka?
Fahmidda: Si loo bixiyo hawlgal buuxa iyada oo aan la xadidnayn liisamada waaweyn.
Xarakaad: Si loo siiyo hawlgal ballaadhan, oo diiradda lagu saaray nidaamyada hawlgalka bilaashka ah.
Is beddelidda: In la helo dokumenti dukumenti sax ah iyo macluumaad wargelin ah oo ku saabsan go'aan qaadashada.
Wadashaqeyn: Si loo gaaro isku xirnaan guuleysata alaabada kale ee softiweerka.
Dheecaan: Si loo oggolaado adeegsiga iyo adeegsiga xaalado kala duwan iyo kiisaska isticmaalka.
Sidaa darteed, adduunka oo badan farsamooyinka, heerarka, barnaamijyada, xeerarka ama ku dhaqanka wanaagsan si loo hubiyo in shey kasta oo softiweer ah oo la abuuray uu leeyahay heerka ugu sarreeya ee tayada farsamada, isla markaana uusan ku urursanayn waqti ka dib, heer kasta oo deyn farsamo ah. Xeerarka, sidii tii hore ISO / IEC 9126 iyo kan hada socda ISO / IEC 25000. Barnaamijyada, sida Sonaqube iyo Better Code Hub. Iyo farsamooyin ama nidaamyo, sida adeegsiga qiyaaso nooca Arrimaha Xannibaadaha o Khadadka la duubay.
"Marka software la dhiso, farqiga u dhexeeya sida ay tahay in loo dhiso si sax ah (marka laga eego dhinaca farsamada) iyo sida ay dhab ahaan u dhisan tahay waxaa loo yaqaan deyn farsamo. Deyntaas, haddii aan wax si sax ah loo samayn, way sii kordheysaa ama ku soo urureysaa waqti ka dib waxayna u horseedi doontaa inay ku kacdo qarash badan iyo in ka badan sidii loo hirgelin lahaa howlo cusub ama si fudud loo ilaalin lahaa barnaamijkaas. Waxay u egtahay inay tahay deyn uu bangigu na siiyay". Tayada farsamada ee softiweerka, waa qodob muhiim u ah guusha (deynta farsamada) | Excentia
Dhaqan tayo farsamo oo wanaagsan
Maqaalkeena, waxaan soo qaadanay tusaale ahaan Dhaqannada wanaagsan uuraysatay oo shaaca ka qaaday "Xeerka Hindisaha Horumarinta" del Bangiga Horumarinta Maraykanka, baaxadda qiimeynta farsamada, taas oo ay tahay in la fuliyo marka la soo saarayo alaabada software-ka (aaladaha dhijitaalka ah), gaar ahaan bilaash iyo furan, si loo damaanad qaado tayada farsamada ka mid ah.
Waxaa ka mid ah dhaqamada wanaagsan ee ay bixiyaan, waa kuwa hoos ku xusan:
Qor cutubyo gaagaaban oo koodh ah: Si loo fududeeyo fahamka xeerka.
Qor cutub fudud oo koodh: Si loo fududeeyo xaqiijinta lambarka.
Qor koodhka hal mar: Si loo yareeyo khaladaadka nuqul oo looga fogaado isbeddelada nuqullada ah.
Ka dhig waji wadayaasha baabuurta yar: Si loo fududeeyo dib u isticmaalkooda.
Mas'uuliyado kala duwan oo lagu kala soocay qaybo kala duwan: Si loo fududeeyo beddelkooda.
Labada nooc ee qaab dhismeedka dabacsan: Si loo xagliyo go'doominta qaybaha.
Ka dhig qaybaha dhismaha qaab isku dheelitiran: Si loo fududeeyo fahamka xeerka.
Ka dhig lambarkaaga hoose inuu yareeyo: Si loo fududeeyo dayactirka barnaamijka.
Imtixaanka otomaatiga ah: Si loo hagaajiyo shaqada loona hortago khaladaadka.
Qor koodh nadiif ah: Si looga fogaado kakanaanta koodh horey loo habeeyay.
Si loo ballaariyo macluumaadkan, Dhaqannada wanaagsan arrimaha Dukumentiyada horumarka Software Free, by "Xeerka Hindisaha Horumarinta" del Bangiga Horumarinta Maraykanka waxaad riixi kartaa xiriirka soo socda: Qiimaynta Farsamada - Tilmaamaha lagu daabacayo qalabka dhijitaalka ah. Qoraalkii ugu dambeeyayna waxaan ku sahmin doonnaa qeybta tixraacaya dhaqamada wanaagsan ku saabsan shatiyeynta del Free iyo Software furan naftooda.
Ugu dambeyntii, haddii aad rabto inaad akhriso maqaalkeenii hore ee la xiriira ee la yiraahdo "Dhaqan wanaagsan oo lagu horumariyo Software bilaash ah oo furan: Dukumiinti", dhagsii Halkan.
Waxaan rajeyneynaa taas waa "waxtar yar post" ku saabsan «Buenas prácticas» berrinkii «calidad técnica» taasi waa in loo damaanad qaadaa shey kasta oo softiweer ah oo la soo saaray, gaar ahaan haddii ay tahay «Software libre y abierto», noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta weyn ee baahinta nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo koraya ee codsiyada iyo wixii loogu talagalay «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » dhowr » Tayada Farsamada: Dhaqammada wanaagsan ee horumarinta Software-ka Bilaashka ah